Taariikhda My Butros » 7 Taariikhda Qof walba From City New York Goes On
Last updated: Sep. 24 2020 | 2 min akhri
Haddii aad ku sugan Magaalada New York kula lammaanahaaga, hubi in aad tudhi daqiiqado yar oo aad ku aqrisato this page. Ma hubi dooda xataa haddii aad tahay hal iyo raadinayaan jaal ah ee magaalada; hubaal tijaabinaya mid ka mid ah kuwaas oo loogu talogalay jacaylka aad Samiira ayaa kaa caawin doona si ay u abuuraan aragti wanaagsan. Sidaas, halkan waa todoba xabo oo timir qof walba ka City New York katari (akhri tagaan waa in) on.
1. Daawashada qorrax ka maqlaha ah
Dhallinyarada lammaanaha, Meeshan on Hudson ee hubaal waa mid ka mid ah dalal shukaansi ugu kulul magaalada hadda guryaha. Pan The, taas oo asal ahaan lightship a godan ah 1929, helay Bixin iyo maanta waa mid ka mid ah baararka quusid ugu electrifying aad waligaa heli karto.
Aragtida qorrax ka badan wabiga Hudson ee waa hubaal ciyaareed wacan oo ku darayaa taabasho ah hindiga in ambiance ee bar ah.
2. Bixiya galab ka taataabtay at Botanical Brooklyn ee Garden
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad geli doonaa Oasis magaalooyinka this ee Prospect Heights, waxaad dareemi doontaa sida haddii aad iska yimaadaan miles ka yihiin dhaqdhaqaaqa iyo hawlaha magaalada.
The Brooklyn Botanical Garden leeyahay khasnad dabiici ah oo ku filan in aad adiga iyo lammaanahaaga sii hawlan dhowr saacadood; tusaale ahaan, Flora Native Jannada, Rose Cranford Jannada, Garden Shakespeare oo dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa aad jeceshahay doonaa ugu saabsan meesha waa tacsiyaynta aad halgan si ay u helaan in inta badan qeybaha kale ee magaalada.
3. Safarka A u suuqyada cuntada Flushing
Suuqyada cuntada ee Flushing, City New York caan ku yihiin adeegaya suxuunta delicious Cantonese iyo Mandarin.
Tani waxay noqon lahayd taariikh fiican ee kuwa dhan foodies bonafide. Shaqsiyaadka la dabeecadda ah images dhajinta of kasta oo hadhuudh ah ay leeyihiin on shabakadaha bulshada ayaa sidoo kale ka heli doontaa fikrad shukaansi taasi arrin janaayo intaysan.
4. Socda dib ugu times:
Raadinta in waqti fiican la qaataan lammaanahaaga lagu jiro dayrta? Qorshee taariikh guriga taariikhi ah ee Tuulada jir ah Town Richmond.
5. Booqashada Park Dhexe
Central Park waa meel weyn si ay u tagaan la lamaanahaaga bilaha xagaaga. Waa run in xagaaga ee City New York caadi ahaan waa taxingly huur; Si kastaba ha ahaatee, cimilada noqdo wacan yahay mar qorraxdu dhacdo. Sidaas darteed, bilaha xagaaga, si fudud aad ku qorshayn kartaa taariikhaha fiidkii ee furan ee.
Central Park, iyadoo dhammaan fursadaha madadaalo ah waxa ay leedahay, waa hubaal meel fiican inay yeeshaan shukaansi ah.
6. Hayso qosol ah ee Room dacas The
Qorsheynta inuu baxo aad lammaanahaaga habeenka Talaadada ah? Waxaad tixgalin kartaa joojinta by Room dacas The. Kasta Tuesday, goobta paralympics ee yada Seed Herzog ee comedy show. Isaga, Herzog sida caadiga ah waxa uu leeyahay Hooyo yaab leh oo qosol badan.
7. Ku raaxayso taariikhda movie ugu Bryant Park a
Tani waxay noqon lahayd taariikh fiican ee mahgaciisa movie iyo dhamaan taageerayaasha of Classics kuwa; laakiin, xasuusto taariikhda filim at Bryant Park mar walba waa in loo qorsheeyaa maalmaha Isniinta.
Monday kasta, markay Qorraxdu, movie guriga banaankiisa lagu muujiyay at this park dadweynaha si gaar ah loo maareeyey. Qaar ka mid ah cunto fudud, sibraar khamri ah iyo buste in ay sii laba idinka mid ah oo isku dhafan ay ku filnaan doonto in ay leeyihiin taariikh movie taataabtay.
Waxaa laga yaabaa inaad in goobta ugu taataabtay in City New York qaadan lammaanahaaga, laakiin in la sameeyo taariikhda mid ka mid ah guulaha, waxaad u baahan doontaa Cuntadani waxaa ugu muhiimsan oo ah in jacaylka.
Shan talo oo ku saabsan sida loo wajaho Date A Blind
3 Waxyaabaha aad ka ogaato haddii aad dooneysid in uu ku aamin
8 Great Date First Su'aalo Waxaad Weydiinayaa